ဗွိုင်ယေဂျာ အာကာသယာဉ်ဒီဇိုင်း၏ ပုံစံနမူနာ
44 years,9months, 12 days elapsed
Interstellar mission: 41 years,6months,3days elapsed
၈၂၅.၅ kg (၁,၈၂၀ lb)
September 5, 1977, 12:56:00 (1977-09-05UTC12:56Z) UTC
Cape Canaveral Launch Complex 41
၃၄၉,၀၀၀ km (၂၁၇,၀၀၀ mi)
၁၂၄,၀၀၀ km (၇၇,၀၀၀ mi)
တိုက်တန်ကို ဖြတ်၍ပျံသန်း (atmosphere study)
၆,၄၉၀ km (၄,၀၃၀ mi)
← ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ ဂယ်လီလီယို →
ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ (အင်္ဂလိပ်: Voyager 1) အာကာသယာဉ်သည် နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ပိုင်းနှင့် ကြယ်တာရာကြားနယ်များကို လေ့လာရန် အမေရိကန် အမျိုးသားလေကြောင်းနှင့် အာကာသစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနက ၁၉၇၇ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အာကာသယာဉ်သည် Deep Space Network သို့ သတင်းအချက်အလက်များ ပို့ပေးသည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၃၂ AU အကွာသို့ရောက်ရှိကာ ကမ္ဘာပေါ်မှ လူလုပ်အာကာသယာဉ်များထဲတွင် အဝေးဆုံးသို့ရောက်ရှိသော အာကာသယာဉ် ဖြစ်လာသည်။ဗွိင်ယေဂျာ ၁ အာကာသယာဉ်သည် ယခုအချိန်တွင် ဟေလီယိုစဖီးယားအလွှာ၏ အပြင်ဘက်အကျဆုံးအလွှာဖြစ်သော ဟီလီယိုအာ့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်တွင် နာဆာမှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် နေအဖွဲ့အစည်းမှ ထွက်လာသော ပထမဆုံးအာကာသယာဉ် တစ်စင်းဖြစ်လာပြီဟု အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။
ဗွိုင်ယေဂျာစီမံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်၊ ယင်း၏ညီမ ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ အာကာသယာဉ်ကဲ့သို့ပင် ခရီးစဉ်ချဲ့ထားသည်။ ယင်း၏လုပ်ငန်းမှာ ကျူးပါးခါးပတ်၊ ဟီလီယိုစဖီးယားနှင့် ကြယ်တာရာ ကြားခံနယ်တို့ပါဝင်သော နေအဖွဲ့အစည်း၏ အပြင်ဘက်အား လေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ အဓိက မက်ရှင်မှာ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ဂျိုဗီယမ် စနစ်အားလည်းကောင်း ၁၉၈ဝ ခုနှစ်တွင် စေတန်ရီယမ် စနစ်အားလည်းကောင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၈ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ၂ဝ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ယင်းသည် အကြီးမားဆုံး ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်နှင့် ဂြိုဟ်ရံလများ၏အသေးစိတ်ဓာတ်ပုံများကို ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သော အာကာသယာဉ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၆ဝ ခုနှစ်တွင် ဂရန်းတာဝါမှ အပြင်ဘက်ဂြိုဟ်များအား လေ့လာရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။ ယင်းသည် ၁၉၇ဝ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် နာဆာအား မက်ရှင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။ အတွင်းပိုင်းဂြိုဟ်များအား လေ့လာရေး နည်းပညာများသည် ဒြပ်ဆွဲအားနည်းပညာသစ်ဖြင့် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဂြိုဟ်များ၏ ဒြပ်ဆွဲအားကို အသုံးချကာ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ရောက်ရှိနိုင်သည့်အကွာအဝေးအတွင်း ယာဉ်များကို စေလွှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒြပ်ဆွဲအားအကူအညီသည် အာကာသယာဉ်တစ်စင်းကို ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ကြီးများဖြစ်သော ဂျူပီတာဂြိုဟ် စေတန်ဂြိုဟ် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်များအား တွန်းကန်အား အနည်းဆုံး တိုတောင်းသော ခရီးသွားချိန်များဖြင့် အလည်အပတ်သွားရန် ဖြစ်စေနိုင်ခဲ့သည်။ မူလအားဖြင့် ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ သည် မာရီယာနာ ပရိုဂရမ်၏ မာရီယာနာ ၁၁ အဖြစ် စီစဉ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘက်ဂျက်ငွေ ဖြတ်တောက်မှုကြောင့် ဂျူပီတာဂြိုဟ်နှင့် စေတန်ဂြိုဟ်အား ပျံသန်းရန် နောက်ဆုတ်ခဲ့ရသည်။ ပရိုဂရမ်အား မွမ်းမံလာခဲ့ပြီးနောက် မူလ မာရီယာနာပရိုဂရမ်နှင့် ကွဲပြားစွာ ဗွိုင်ယေဂျာဟု ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဗွိုင်ယေဂျာယာဉ်များတွင် ရွှေရောင်ပလိပ်ပြားဖြင့် လောင်းထားသော အသံချပ်ပြားပါဝင်သည်။ အကယ်၍ အာကာသယာဉ်သည် အသိဉာဏ်ရှိသော သက်ရှိများနှင့်ကြုံတွေ့သည်သော် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထည့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ချပ်ပြားတွင် ကမ္ဘာမြေ၏မြေပုံ သက်ရှိပုံစံ သိပ္ပံအချက်အလက် အဆင့်အတန်း လူသားတို့၏ မတူညီသော ဘာသာစကား ၅၅ မျိုးအပြင် ကမ္ဘာမြေ၏ အသံ ပါဝင်သည်။ ယင်းတွင် ဝေလငါးအသံ ကလေးငိုသံ ကမ်းစပ်အား ပင်လယ်လှိုင်းရိုက်ခတ်သံ ကမ္ဘာအနှံ့မှ သီချင်းမျိုးစုံတို့ ပါဝင်သည်။ မိုးဇက်နှင့် ချက်ဘယ်ရီတို့၏ "Johnny B. Goode" သီချင်းလည်း ပါဝင်သည်။
﻿ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ အာကာသယာဉ်၏ ရေဒီယို ဆက်သွယ်ရေးသည် နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ဘက် ကြမ်းတမ်းလှသော အာကာသထဲတွင် ဆက်သွယ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်မှ Deep Space Network နှင့်ဆက်သွယ်ရန် ၃.၇ မီတာရှိသော စွမ်းအားမြင့် အင်တာနာအား တပ်ဆင်ထားသည်။ ယင်းသည် ဂျူပီတာဂြိုဟ်အကွာအဝေးသို့ ရောက်ပါက တစ်စက္ကန့်လျင် ၁၁၅.၂ ကီလိုဘိုက်အထိ မြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အာကာသယာဉ်သည် ကမ္ဘာမြေသို့ သတင်းအချက်အလက်များ တိုက်ရိုက် မပို့နိုင်တော့ပါက နောက်တစ်ကြိမ် ပို့လွှတ်မှုအတွက် သတင်းအချက်အလက် ၆၂၅ဝဝ ကီလိုဘိုက်အထိ သိမ်းထားနိုင်သော ဒယ်ဂျစ်တယ် တိပ်ရီကော်ဒါ (DTR) ပါဝင်သည်။ သတင်းလက်ခံရန်နှင့် ပို့ပေးရန် ကြာမြင့်ချိန်မှာ ကမ္ဘာမြေနှင့် ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ တို့၏ မျဉ်းဖြောင့်အကွာအဝေးပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် အချက်အလက် ဖြတ်သန်းရသည့်ကြာမြင့်ချိန်မှာ ၁၆ နာရီကျော် ဖြစ်သည်။
﻿ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ တွင် ကြီးမားသော ရေဒီယို သာမိုလျှပ်စစ် ဂျင်နရေတာ (RTG) သုံးခုအား တပ်ဆင်ထားသည်။ MHW-RTG တစ်ခုချင်းစီတွင် ပလူတိုနီယံ-၂၃၈ အောက်ဆိုဒ် အလုံးရေ ၂၄ ခုပါဝင်သည်။ RTG မှထုတ်ပေးသော စုစုပေါင်း စွမ်းအင်မှာ ၄၇ဝ ဝတ်(watt) ဖြစ်သည်။ RTG မှထုတ်ပေးသော စွမ်းအင်ပမာဏသည် နှစ်ကာလရှည်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျှော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ သည် ၂ဝ၂၅ ခုနှစ်ထိ ဆက်လက် အလုပ်လုပ်နေအုံးမည်ဖြစ်သည်။
ဗွိင်ယေဂျာ ၁ အာကာယာဉ်သည် ၁၉၇၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် ကိတ် ကာနာဗီရယ် ဖလော်ရီဒါမှ Space Launch Complex 41 ဖြင့် ပစ်လွှတ်ခဲ့သည်။ ညီအစ်မ ဗွိုင်​​ယေဂျာ ၂ အာကာသယာဉ်ကိုမူ နှစ်ပတ်စောကာ ၁၉၇၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂ဝ ရက်နေ့တွင် ပစ်လွှတ်ခဲ့သည်။ ဗွိင်ယေဂျာ ၁ အာကာယာဉ်သည် ဂျူပီတာဂြိုဟ်နှင့် စေတန်ဂြိုဟ်ဆီသို့ တိုတောင်းသောလမ်းကြောင်းဖြင့် စောလျင်စွာ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ပိုင်အိုနီးယား ၁၁ သည် တိုက်တန်အား တစ်နှစ်စောကာ ယင်း၏ ထူထပ်သော ဓာတ်ငွေ့လေထုအား ခြေရာခံမိသဖြင့် ဗွိုင်ယေဂျာ အာကာသာယာဉ်များကို အနီးကပ်လေ့လာရန် ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။ ဗွိုင်ယေဂျာ အာကာသယာဉ်သည် စနေဂြိုဟ်၏ ဒြပ်ဆွဲအားကို အသုံးချကာ slingshot နည်းဖြင့် ပလူတို ဂြိုဟ်ပတ်လမ်း ကျော်သည်အထိ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကောင်းသည်။
၁၉၉ဝ ခုနှစ်တွင် ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ သည် နေအဖွဲ့အစည်း၏အပြင်ဘက်မှ family portrait အား ပထမဆုံး ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ယင်းတွင် နာမည်ကြီး အပြာရောင်အစက်လည်း ပါဝင်သည်။ ဗွိုင်ယေဂျာ အာကာသယာဉ်သည် ၂ဝ၂၅ ခုနှစ်ထိ အလုပ်လုပ်နေအုံးမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ယင်းသည် စတင်ပစ်လွှတ်ပြီး နှစ်ပေါင်း (၄၈) နှစ် ဖြစ်ပေမည်။ အာကာသယာဉ်သည် ကမ္ဘာမြေမှ ၆၉.၄၁၉ AU (၁.၀၃၈၄၉×၁၀၁၀ ကီလိုမီတာ) အကွာသို့ ရောက်ရှိနေသည်။ ယင်းသည် ကြယ်တာရာကြားခံနယ်ပယ်သို့ ဝင်လာပြီဖြစ်သည်။ ဗွိင်ယေဂျာ ၁ အာကာသယာဉ်သည် နေမှ အဝေးဆုံးအကွာအဝေးသို့ရောက်ပါက အမြန်နှုန်းမှာ တစ်စက္ကန့်လျင် ၁၃ ကီလိုမီတာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ စတင်ပစ်လွှတ်စဉ်က အမြန်နှုန်းမှာ တစ်စက္ကန့်လျင် ၁၇.၂၆ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှ ပစ်လွှတ်ခဲ့ဖူးသမျှထဲတွင် အမြန်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ပလူတိုဂြိုဟ်သိမ်အနား နောက်ဆုံးချဉ်းကပ်ခဲ့သော New Horizons သည်ပင် ထိုအမြန်နှုန်းကို မမှီပေ။ New Horizons ၏ အမြန်နှုန်းမှာ တစ်စက္ကန့်လျင် ၁၅ ကီလိုမီတာနှုန်းသာ ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၆ အနီးစပ် Ultraviolet Spectrometer လုပ်ဆောင်ချက်အား အဆုံးသတ်
၂၀၁၈ အနီးစပ် Data Tape Recorder (DTR) အဆုံးသတ်
2020 သိပ္ပံဆိုင်ရာပစ္စည်းများအား ရပ်တန့် Low-Energy Charged Particles, Cosmic Ray Subsystem, Magnetometer, and Plasma Wave Subsystem များသည် အလုပ်လုပ်နေအုံးမည်ဟု မျော်လင့်ရသည်
﻿ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ အာကာသယာဉ်အား ကမ္ဘာမြေမှ ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ထားသည်။
↑ Voyager 1။ NSSDC Master Catalog။ NASA/NSSDC။
↑ Voyager 1။ N2YO။
↑ Voyager 1။ BBC Solar System။
↑ 1960s။ JPL။ 8 December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mack၊ Pamela (1998)။ "Chapter 11"။ From engineering science to big science: The NACA and NASA Collier Trophy research project winners။ History Office။ p. 251။ ISBN 978-0-16-049640-0။
↑ Ferris၊ Timothy (May 2012)။ "Timothy Ferris on Voyagers' Never-Ending Journey"။ Smithsonian Magazine။4November 2013 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 19, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Voyager Golden record။ JPL။
↑ High Gain Antenna။ JPL။
↑ NASA News Press Kit 77–136။ JPL/NASA။
↑ "U.S. space missions using radioisotope power systems" (1999). Nuclear News 42 (4): 26–34.
↑ Encounter with Jupiter။ NASA။
↑ Planetary voyage။ NASA။
↑ Voyager - Images Voyager took of Jupiter (in en)။
↑ Encounter with saturn။ NASA။
↑ New Horizons Salutes Voyager။ New Horizons (August 17, 2006)။9March 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Voyager: Operations Plan to the End Mission။ NASA။
↑ Voyager - Mission Status။
↑ Voyger: Spacecraft Lifetime။ Jet Propulsion Laboratory။ NASA (March 3, 2015)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗွိုင်ယေဂျာ_၁_အာကာသယာဉ်&oldid=699399" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။